Ogaden News Agency (ONA) – Wafdigii JWXO ayaa shir saxaafadeed ku qabtay Nairobi
Wafdigii JWXO ayaa shir saxaafadeed ku qabtay Nairobi
Magaalada Nairobi waxaa maanta saxaafada kula hadalay Mas’uuliyiintii JWXO ee halkaasi maalmahan u joogay wadda hadalada.Gudigii wadda hadalada JWXO ee Nairobi ku suganaa ayaa Hotelka Spren kula hadalay saxaafada caalamka oo uga warmay wadda hadaladii dhexmarey Itoobiya iyo ONLF.
Mudane Cabdiraxmaan Sh Mahdi oo ah gudoomiyaha gudiga wadda hadalada ayaa saxaafada u sheegay in wadda hadalkii uu hakad galay ka dib markay Itoobiya ku dadaashay in wadda hadalka ay fashiliso. Mudane Maaday oo ka hadalayey sidii ay ku bilawdeen wadahadaladu ayaa yidhi; “Dawlada Itoobiya ayaa Kenya ka codsatay sanadkii 2011 inay wada-hadalsiiso iyaga iyo jabhadda ONLF, ka dib waxaa dalka UK noogu yimid wafdi uu hogaamiyahayay Wasiirka Gaashaandhiga dalka Kenya mudane Yusuf Xaaji oo ay weheliyaan Cali Qorane iyo Mudane Yusuf Xassan.”
Wuxuu intaa raaciyaya mudane C/raxmaan Mahdi; “Maadaam sanadkii 1994 tii aan go’aansaney in Itoobiya aan ku wada hadalo dal sadexaad iyadoo ay goobjoog ka yihiin daraf 3xaad, waan aqalay fariintii ay noo wadeen ergadii Kenya nooga timid”.
Wareegii koobaad ee wadda hadalkuna wuxuu dhacay Sep 6-7 dii iyadoo lagu heshiisay qodobo ay ka mid ahaayeen in cidina ayna wax shuruud ah ku xidhin wadda hadalada. Wuxuu yidhi mudane Madey; ” Wareegii labaad ayaan isugu nimid Nairobi 15-16 iyo 17 Bishan. Dhamaan shuruudihii lagu heshiiyey wareegii koobaad Itoobiya way ka baxday wayna dhinac mareen heshiiskii xiligaas aan saxiixaney, waxayna la yimaadeenn goobtii wadahadalka in ay dhahaan waan in aad dastuurka Itoobiya aqoonsataan, taasoo ahayd qodobkii kaliya ahaa ee ay miiska la yimaadaan. Qodobkan wax uu ahaa midkii shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ay ka dagaalameen 1994 tii markii la damcay in qasab lagu maransiiyo.”
Waxaa kaloo uu sheegay mudane C/raxmaan Mahdi; “Anaga doodanadu waxay ahayed Fulinta xaqa aayo ka talinta Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya iyo qadiyada Ogaadeeniya way ka gudo wayntahay Dastuurka Itoobiya mana ogolaaneyno wixii shacabka Soomaalida Ogaadeeniya dagaalka 20 ka sano ay darteed u galeen in aan meel banaan kaga tagno.”
Wuxuu ku soo gunaanaday inuu shirkii wadahadalka nabadeed uu sidaa hakad ku galay, isagoo u mahadnaqay dawladda Kenya, xukuumad iyo shacabba, gaar ahaan ergadii ka socotay dawladda Kenya ee shirka hagaysay.